Dr Robert Redfield Vana Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Vanachiremba Dr. Robert Redfield Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Dr Robert Redfield Biography Chokwadi.
Yedu vhezheni yeDr Robert Redfield's Biography inoputsa nyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu hwemhuri, Mukadzi, Hupenyu hwega, Kuwana mari, Chitendero uye Untold Chokwadi nezvake. Iko kutsvagurudzo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paupenyu hwake hwepakutanga kusvika mukurumbira wake.
Yakakurumbira yekutamba yakakosha pakumisa iyo Corona Virus Pandemic kuUnited States. Iye ndiye iyezvino Director weCentre for Disease Control and Prevention. Gara kuburikidza isu tichikuzadza iwe neiye yake inofadza yehupenyu.
Dr Robert Redfield Nyaya dzeChidiki:
Tisati tatanga, mazita ake akazara ndiRobert Ray Redfield Jr. Iye akazvarwa musi wa 10 Chikunguru 1951 kuvabereki vake; vaive vese masainzi.
Uye zvaizobatsira kukaka kutanga wechidiki Redfield mukuchiva kwekunyepedzera muKutengesa kwekurapa seBasa. Baba vaRobert vakafa vachiri vadiki.
Robert anofanira kunge aive nehunyanzvi hwekuzvarwa ruzivo rwekuzvarwa mumhuri yakakwirira.
Nez zero inonetseka pamusoro pezvinodiwa zvemhuri dzimba, chikafu uye hutano;
aive nemikana yekufungisisa, kuverenga uye kudzidza.
Kunyangwe aifanira kuona kurasikirwa kwababa vake achiri mwana, mai vake vaiita kuti mhuri iratidze sainzi pamoto. Kuwanawo mukana wekuwana kuraibhurari yevabereki vake yaive yakawanda uye.
Dr Robert Redfield Biography-Mhuri Yekuseri:
Kurerwa mumhuri yemhuri, nababa, amai, uye vana kwakabvumidzwa kupa vana, hwakanakisisa hunhu hwehupenyu. Zvino, ndizvo izvo zvaiita semhuri yaRobert, vabereki vese vari kushanda kuti vape kugadzikana kwemari. Zviwanikwa zvaisambove nyaya.
Dr. Robert Redfield Biography-Mhuri Dzinotangira:
Ehe, Robert muchena-weAmerican ane nhoroondo nehupenyu hwepakutanga hwakanyorwa kudzoka kunzvimbo yekuverenga vanhu - kumaodzanyemba kweMontgomery County, Maryland kuUS inonzi Bethesda. Guta rinozivikanwa kwazvo nekugona kwaro kwekurapa.
Iyo imba kune National Institutes of Health (NIH) uye National Naval Medical Center yeUnited States.
Dzidzo yaDr Robert Redfield:
Hazvina kujairika kuti vadzidzi muCollege vashande vachiri kuchikoro, asi yaive nyaya yaRobert. Akaenda kuGeorgetown University, uye akashanda muColombia University maLabhoratari uko kuongororwa kwavo kwakanyanya kunotarisana nezvirwere zvevanhu.
Akawaniswa Bachelor of Science kubva kuCollege of Arts neScience kuGeorge University muna 1973. Robert akabva aenda kuGeorgetown University School of Medicine. Akapihwa Chiremba wake wekurapa muna 1977.
Basa raDr Robert Redfield Rinovaka-up:
Kukura mumhuri yaive nerudo rukuru nesainzi, Robert akafunga kuti chimiro chesainzi chainyanya kufadza aive mushonga uye chimiro chemunhu. Asi huya ufunge nezvayo isu tinosangana nehutachiona.
Redfield, yakaona kuti mavhairasi anga aine mukana, wekuvezwa kuitira kuti neimwe nzira ive nzira dzekutumira kwemishonga yeramangwana. Uye nekudaro akatanga kunyatsofarira virology.
Dr Robert Redfield's Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira:
Denda reAIDS richangotanga apo Redfield aive mukudzidzira kufambidzana naye mushure mekurapa kwemukati uye chirwere chinotapukira kuWalter Reed Army Medical Center (WRAMC) muWashington, DC Vazhinji vashandi vakabatanidzwa neAIDS pakutanga havana kuvakwa.
Uye saka Robert akatanga kutsvagisisa nezveutachiona hweHIV - kana AIDS panguva iyoyo. Mukubatana nevamwe vanhu paiyo NIH yakadai Robert Gallo nevamwe paNCI (National Cancer Institute). Aive chikamu chechikwata chairatidza kuti hutachiona hweHIV hwaive hwechikonzero che AIDS.
Akashanda naSam Broder pane mamwe marapirwo matsva, AZT (Azidothymidine); mushonga weantiretroviral unoshandiswa kudzivirira nekurapa HIV / AIDS. Nguva pfupi yapfuura, kushanda na Anthony Fauci's boka pane mamwe eemunopathogenesis.
Dr Robert Redfield's Biography- Simuka Mukurumbira:
Sa chiremba wemauto anoshanda kuWalter Reed Army Medical Center muWashington kwemakore makumi maviri nemaviri, ndiye akatanga kuona kuti chirwere ichi hachiganhurirwe nevarume veungochani. Nguva pfupi yapfuura, akave nebasa rake rechipiri paUniversity yeMaryland kwemakore makumi maviri nemasere.
Akashanda saiye purofesa wekurapa zvekurapa uye hutachiona hwehutachiona uye Mukuru wechirwere chinotapukira, Aivawo mutevedzeri wasachigaro wezvekurapa, uye akabatana naye director weInstitute of Human Virology. Mumwe wake mutsvagiridzi weutachiona Robert Gallo uye hutachiona hwehutano hutano William Blattner paYunivhesiti yeMaryland Chikoro cheMishonga muBaltimore vakabatanidzwawo.
Mukurumbira wake wakatanga kupararira apo Mutungamiri Donald Trump vakamusarudza saDirector weCDC (Center for Disease Control and Prevention). Kugadzwa kwaRedfield kwakatanga musi wa 26 Kurume 2018.
Dr Robert Redfield's Spouse:
Paainunura vacheche sevadzidzi vekurapa, Robert aizoona rudo rwehupenyu hwake; Joyce Hoke. Aive mubatsiri wekuyamwisa panguva iyoyo. Ivo duo vakaroora chinguva uye vava nevana vatanhatu (6).
Hupenyu hwemhuri yaDr Robert Redfield:
Hazvina mubvunzo kuti iyo iri kuuya kubva kumhuri yekurapa inopa Robert Redfield nhoroondo yakajeka yebasa rake rakasarudzwa muhupenyu uye kubudirira kukuru zvakare. Zvingave kuti vana vake, vaizoteedzawo nzira yemushonga futi?
Zvimwe Nezve Baba vaDr Robert Redfield:
Zvakare, mune yekurapa uye sekudaro, anoshanda kuNational Institutes of Health ndibaba vaRobert. Akashanda pazvinhu zvakati wandei mukati ma'50s izvo zvakava mubhedha wounyanzvi hwesainzi makore makumi mashanu gare gare.
Baba vaRedfield vakashaya vaine makore makumi matatu nematanhatu, vachisiya Redfield nevanun'una vake vaviri varerwa naamai vavo.
Zvimwe Nezve Amai vaDr Robert Redfield:
Iye, zvakadaro, akashandawo kuNational Institutes of Health sezvakaitwa nababa vaRedfield. Roberts mum aigara achinamata kuti mwanakomana wake ave "chiremba chaiye". Uye munamato uyu wakapindurwa, handizvo? Amai vaRedfield vakamurera iye nevamwe vana vaviri hama yake oga mushure mekufirwa nemurume wake.
Nehurombo, amai vaRedfield vakashaya aine makore makumi mapfumbamwe nematanhatu (96).
Zvimwe Nezve Vana vaDr Robert Redfield:
Sezvambotaurwa nezvazvo, Redfield vane Vatanhatu (6) vana uye zvakare, vane vapfumbamwe (9) vazukuru. Haisi yakawanda info inowanikwa nezve vana vake vatanhatu. Isu, zvakadaro tinoziva vaviri (2) avo vanopindawo basa rekurapa zvakare.
Zvakawanda NezveDhi Robert Redfield Mhuri:
Zvakakwana kuti uzive kuti Redfield aive nevanun'una vaviri; uye nekudaro vanofanirwa kunge vaine muzukuru (muzukuru) uye muzukuru (mukwamwene).
Chitendero chaDr Robert Redfield:
Dr Redfield haanyari nezvekutenda kwake kwechiKatorike. Iye inhengo yeCathedral yaMary Our Queen parish paCharles Street muHomeland. Redfield nemukadzi wake vanga vari parishioners vanoshanda kwemakumi emakore uye vachishandira seEucharistic minister (Holy Communion Steward).
Muna1990, Redfield vakanyora bhuku rekuti 'Vakristu mu Zera reAIDS'. Pepa iri rakakurudzira vaverengi kuti "varambe vaporofita venhema vanoparidza nzira dzinokurumidza kugadzirisa makondomu uye tsono dzakasununguka."
Dr Robert Redfield Hupenyu hweMunhu:
Iyo inochengetedza Republican, Dr Redfield munguva shoma yebasa vanopinda Misa yeKaturike zuva nezuva.
Uye saka anofarira kutora kufamba kwete kutora mota kune mafupi mafupi, kunyanya kubva kumba kwake
muBaltimore kuenda kuCathedral yaMariya Mambokadzi wedu.
Anofarira kunyora uye anoshandira pasocial media neake Twitter pfumo aine anenge 194.6k vateveri. Iye murume mutete, ane maziso ebhuruu uye ane mhanza yebvudzi.
Dr Robert Redfield's Mararamiro:
Izvo zvaive pachena zvekuti Vanhu vakazviona zvakare zvakawoma kuti vanzwisise kuti chii chakaitwa chakaita kuti Yunivhesiti yeMaryland ifunge kuti Redfield inofanirwa madhora zviuru zvisere nemakumi gumi nemashanu emwedzi gumi nemashanu (yaive pamberi pekunge ave Director, CDC).
Iyo CDC Director Inowana $ 209,700 pagore. Iyo mambure ake akakosha haizivikanwe. Iye nemudzimai wake vanogara pane imwe imba inovakwa yeWashington.
Dr Robert Redfield's Untold Chokwadi:
Chokwadi + 1- Mubairo:
Robert akagamuchira mibairo yakati wandei kuburikidza nebasa rake saachiremba-musayenzi, kusanganisira degree rekuremekedza kubva kuNew York Medical College uye mubairo wehupenyu hwekupa kubva kuInstitute for Advanced Studies muEmunology uye Chembere.
Chokwadi: # 2- Mari yake Yemubhadharo seCDC Director:
Aifanira kuwana madhora mazana matatu nemakumi matatu nemashanu emadhora pagore, shoma shoma pamubhadharo waPresident Trump, iwo anenge madhora zviuru zvina. Nehurombo, Redfield yakasangana nemibvunzo kubva kuDemocrats, inotungamirirwa Sénata Patty Murray yeWashington, uye zvakabvumwa kudzikisa muhoro wake kusvika pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu panzvimbo iyoyo
Ichokwadi # 3 inokanganisa paCOVID-19 Kurwisa:
Iyo CDC Director inotsvaga kuchengetedza America yakasimba 24/7 ichishandisa sainzi nedata, uye kududzira izvo mukuita zvine hutano hweveruzhinji chiitiko uye mutemo. Iyo bumbiro ichaita kuti vanhu vagamuchire iyo yekudzivirira kwekudzivirira nekudzivirira; kuwanikwa nekudonha, 2020.
Dr Robert Redfield Biography Dhata
Zita rizere: Dr Robert Ray Redfield Jr.
Nick Zita: Robert Redfield
Zuva rekuzvarwa: 10 Chikunguru, 1951
Nyika Imba: Bethesda, Maryland, US
Mumwe: Joyce Hoke
Dzidzo: Georgetown University (BS uye MD)
Basa: Virologist uye Medical Researcher
Hobbies: Kuverenga uye zvechitendero zvechitendero.
Muhoro: $ 209,000 per annum
Bato rezvematongerwo enyika: Republican
Nationality: American (White White Eagian)
Hurumende Yemubatanidzwa: CDC Director, nyika dzakabatana
Tine chokwadi chekuti kuverenga nyaya yehudiki yaDr Robert Redfield uye nzira yaanosarudza nayo nzira yake yebasa pasina, uye kusadzora moyo kune mukurumbira wemubereki wake kwave kuchinakidza uye kuchikurudzira.
Feature Image Inopa: "Chirungu: Mufananidzo wepamutemo waDr Robert R. Redfield, seMutungamiriri weCDC.”NeCenters for Chirwere Kudzivirira uye Kudzivirira. Sebasa re Hurumende yemubatanidzwa yeUS, mufananidzo uri mu public domain. Iyo Image faira ine yakatorwa mufananidzo inonzi: Faira: Robert R. Redfield.jpg.